Nhau - Silicon carbide zvedongo pombi
Nekuda kwekuoma kwayo kwakanyanya, kurwisa kwakanyanya ngura uye kwakanyanya tembiricha simba, silicon carbide ceramics yakashandiswa zvakanyanya. Iko kune kunyanya kunotevera zvinhu zvinotevera: silicon carbide ceramics ine yakanaka chemakemikari ngura kuramba, simba rakakwira, kukwirira kuomarara, yakanaka kurira kwekurwisa, diki yekukwesana coefficient, uye yakanyanya tembiricha kuramba, saka ndicho chakanakira zvinhu zvekugadzira chisimbiso zvindori. Kana ichinge yakabatanidzwa ne graphite zvinhu, kukakavadzana kwayo coefficient idiki pane iyo yealumum ceramics uye yakaoma alloys, saka inogona kushandiswa mune yakakwira PV tsika, kunyanya mumamiriro ekushanda ekutakura akasimba acids uye alkalis.
Silicon carbide zvedongo pombi ine yakanyanya kuomarara, yakakwira simba, yakanyanya tembiricha uye ngura kuramba, uye mamwe maitiro, zvichienzaniswa nehupenyu hwehupenyu hweyakajairika simbi pombi, mune imwecheteyo chiteshi nharaunda kazhinji kacho nguva yayo yebasa kana yakareba.
Sainzi uye hunyanzvi hwekuvandudza ndiyo musimboti wemakwikwi esilicon carbide zvedongo pombi emakambani. Nekuderera kwehupfumi hweChina mumakore achangopfuura, mazhinji emakambani ekugadzira anogona kungotarisira kudzoka kwehupfumi mukuwedzera kudzora mutengo wekugadzira. Nyanzvi dzinotenda kuti mune yakaoma hupfumi mamiriro, anokodzera vagadziri vanofanirwa kuwedzera kusimba kwesainzi uye tekinoroji hunyanzvi, nepo kubva pahunhu, mutengo uye kutsvagisa nekusimudzira, uye zvimwe zvinhu zvekuyedza kukanganisa musika musango.
Kwete .83, Xueyuan Road, Yuhua Dunhu, Shijiazhuang Guta, Hebei Province